Fandalinana ny ampahany amin'ny milina arintany lehibe fanariana amin'ny alalan'ny epc process
Ny fanariana EPC dia manondro ny fizotran'ny etona sy manjavona ny modely. Ny modely eto dia manondro ny bobongolo ampiasaina amin'ny fanariana, antsoina hoe fanariana EPC. Ny fanariana fasika mahazatra dia ny fandatsahana ranon-javatra vy ao anaty lasitra manokana ary esorina ny bobongolo aorian'ny fiforonan'ny ranon-javatra metaly mba hamoronana ny tiana ...
Fandrosoan'ny fikarohana ny coatings ho an'ny ductile vy epc fanariana
Ny vy nodular, toy ny karazana fitaovana vy mahery vaika miaraka amin'ny fananana akaiky ny vy, dia manana tombony amin'ny vidin'ny famokarana ambany, ny ductility tsara, ny tanjaky ny harerahana tsara sy ny fanoherana, ary ny fananana mekanika tena tsara. , crankshaft,...
Shell fanariana dia ny fampiasana ny mifono fasika toy ny akora, ny bobongolo dia nafanaina ny mari-pana, amin'ny alalan'ny fasika fitifirana, insulation mba hanao mifono fasika solidification, lasitra, mamorona sasany hatevin'ny akorandriaka, ny ambony sy ny ambany akorany mifamatotra miaraka amin'ny. binder, mamorona tanteraka ...
Famakafakana momba ny fananganana mekanika amin'ny tsy fahampian'ny fampidirana slag amin'ny fanariana vy amin'ny epc
1 Ny fiparitahan'ny lesoka fampidirana slag amin'ny fanariana vy miaraka amin'ny epc Sarotra be ny mamokatra fanariana vy misy bobongolo very. Amin'izao fotoana izao, ny ankabeazan'izy ireo dia fanariana mahatohitra, fanoherana ny hafanana ary ny harafesina tsy misy fanodinana na fanodinana kely, na ny rindrina manify hafa ...
1 Fampidirana kilema amin'ny epc castings Tena fahita matetika ny fampidirana kilema amin'ny epc castings. Ny tsy fahampian'ny fampidirana amin'ny casting epc dia matetika mampihena ny fananan'ny castings. Amin'izay fotoana izay ihany koa, noho ny endrika tsy ara-dalàna amin'ny fampidirana, dia mety hiteraka triatra na triatra mihitsy aza ny castings mandritra ny serivisy ...
Fikarohana momba ny famakafakana ny vidin'ny famokarana sy ny fanaraha-maso ny fanariana fampiasam-bola
Famokarana fanariana fampiasam-bola dia ahitana dingana efatra indrindra: fanomanana maody, fiomanana akorandriaka, fanariana firaka ary fitsaboana aorian'ny fanariana. Satria ny fomba dingana dia tsy dingana isan-karazany, vokatra mikoriana Complex, lava famokarana tsingerin'ny, ary ny fanariana dingana dia tena matihanina. Ny...
Ny fiantraikan'ny latex fotsy sy silica sol fitambarana binder amin'ny toetran'ny fanariana bobongolo very ho an'ny vy
Miaraka amin'ny fampivoarana ny indostrian'ny fandrefesana any Shina, dia tsy ilaina fotsiny ny manome castings avo lenta sy mazava tsara ho an'ny indostrian'ny famokarana fitaovana, fa koa mba hahatratrarana ny faritanin'ny fitaovana, ny fanjifana angovo kely, ny fandotoana ambany ary ny fampandrosoana maharitra. Lo...
Ny dingana EPC dia ampiasaina amin'ny famokarana vy karbaona avo lenta
EPC dia manana kalitao fanariana tsara sy vidiny ambany. Ny fitaovana dia tsy voafetra, ny habeny dia mety; Avo ny refy marina, malama ambonin'ny; Ny tsy fahampian-tsakafo anatiny, ny tavy matevina; Azo tanterahina amin'ny ambaratonga lehibe, famokarana faobe; Afaka manatsara ny tontolon'ny asa izany, mampihena ny asa mafy ...
Fampiharana ny fitaovana feno lasitra manjavona
1 Fampiharana ny dingana famokarana EPC Ny teknolojia EPC no fanalahidy ary fitaovana no antoka. (1) Asa fanadihadiana mialoha Ny asa fanadihadiana savaranonando dia mizara roa: voalohany, ny fahazoana ny fahalalana momba ny EPC avy amin'ny Internet sy ny boky matihanina; Ny...
Optimization famolavolana ny lehibe ductile vy fanariana dingana
1 Fanariana kilema amin'ny ampahany lehibe ductile vy Fihemorana lavaka, shrinkage porosity, slag fampidirana, rivotra lavaka, peeling, deformation sy ny sisa dia mahazatra fanariana kilema amin'ny fasika fanariana vy ductile lehibe. Ireo kilema fanariana mahazatra ireo dia matetika misy fiantraikany amin'ireto anton-javatra manaraka ireto. Ho an'ny doka lehibe ...
Ny mekanika sy ny fisorohana ny fitomboan'ny karbônina amin'ny vy very
Lohahevitra mampiady hevitra foana ny carburization amin'ny fanariana vy avy amin'ny EPC. Betsaka ny andrana natao raha mety amin'ny famokarana vy ny EPC, indrindra fa ny fanariana vy ambany karbaona. (1) ny trangan-javatra sy ny fomba fiasan'ny carburization Surface carburization ...
Fampiharana ny teknolojia prototyping haingana amin'ny fampiasam-bola marina fanariana
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny fanatsarana tsikelikely ny tsenan'i Shina rafitra toe-karena sy ny fanatsarana haingana ny firenena feno hery, Aerospace sy ny fiarovana ny firenena ny siansa sy ny teknolojia dia nanomboka ho lasa ny firenena lehibe fampandrosoana indostria. Fikarohana habakabaka, d...
123456 Manaraka > >> Pejy 1/8